Ajjeechaa Jamaal Kaashogjii irratti Tuurk bal'inaan ibsa laatte - BBC News Afaan Oromoo
Barreessaafi gaazeexxeessaa lammi Saawudii Jamaal Kashogii
Tuurk Gaazexeessaa Saawudii Jaamaal Kashoogjii, bataluma Qoontsilaa ol seene sana hudhame jechuun akkaataa itti ajjeefamera jettee amantu ilaalchiftee yeroo jalqabaaf ifatti ibsa laate
Ibsi kun waa'ee ajjeechaa Onk 2 Istaanbul, qoontsilaa Saawudii keessatti taasifame ilaalchisee gabaasa midiyaaleen ta'aa ture hordofee kan kennameedha. Tuurkiis hanga yoonaatti ragaa hindhiheesine.
Akka itti gaafatamaan abba alangaa Irfaan Fiidaan jedhanitti, walgahiin qondaaloota Saawudii gita isaanii ta'an waliin taasisanis ''bu'aa qabatamaa hinargisiifne''.
Walgahii kana ilaalchiftees Saawud Arabiiyaan yaada hin laanne.
Akka ibsi Tuurk jedhutti: ''Akkuma durfamee karoorfametti, Jamaal Kaashoogjii akkuma qoontsilaa waligalaa kan Saawudii Araabiyaa galeen hudhamuun ajjeefame''.
Itti dabaluunis, ''akkuma durfamee irratti saganteefametti'' reeffi isaas kukkutamee barbadaa'eera, jedha ibsichi.
Namni lammi Saawudii Kaashogjiin dhaabbata maxxansaa Ameerikaaf kan hojjetuufi geggeesitoota biyya isaa qeequun kan beekamuudha. Reeffi isaa ammayyu hinargamin malee, Tuurk, Ameerikaafi Saawuud Araabiyaa dabalatee qoontsila sana keessatti akka ajjeefame irratti waliigalu.
Akkaataa itti ajjeefame ilaalchise garu, hanga yoonaatti waligalteerra hingeenye.
Walgahii dhihoo godhame keessatti maaltu ta'u?
Abootiin alangaa gama lamaanuu wayita walitti dhufanitti Tuurk gaafiilee sadii dhiheesitee turte:
Reeffi Kaashoogjii eessa jira?
Karoorsuu ajjeechaa Kaashoogjii ilaalchisee odeeffannoo haaraa yoo qabaatan?
Qaamni ''naannoo sana isaanii waliin hojjetu'' eenyu?
Angaawaan Saawudii maqaansaa akka hin himamne barbaadan tookko Rooyiteersitti, reeffi Kaashogjii huccuun maramee '' qaama naannoo sanatti waliin hojjetan'' itti kennuun gatameera, jechuun himaniiru.
Akka Tuurk jettuutti, jiilichis gaafii dhihaateef guyyaa Roobiirra deebii barreefamaan kennaniiru.
Saawuudiinis, deebiin gaaffii kanaa qorannoo waloon geeggeefamurraa qofa kan argamu ta'a jechuun dubbatteetti. Waa'ee jiraachuu 'qaama waliin hojjetanii' ilaalchisee ifatti deebi hinlaatiin akka hafanis beekameera.
Tuurk maal jette?
Ajjeechaa kana ilaalchisee Tuurk Sawudii fulaa fuullatti qeequurra of qusataa jirti.
Haata'u malee, paartii aangoorra jiru AK keessatti hangafni dubbi himaa kan ta'an tokko akka jedhanitti ajjeechaan kun ajaja angaawaa olaanaa malee kan raawwatu miti jechuun dubbataniiru. Sawudiin garuu maatiin moototashee akka harka keessa hinqabne dubbatti.
Torban darbe keessa Pirezidaantiin Tuurk mootii Sawudii Salmaan waliin akka dubbataniifi qorannoo ajjeechaa kanarratti akka waliin hojjetan ibsaniiru.
Du'a barreessa kana ilaalchisee ragaa sur-sagalee akka qaban angaawaan Tuurk kan maqaan isaani hindhahamiin tokko midiyaatti kan himani kan turan ta'us, hanga yoonaatti waanti gad-dhiifame tokkoolle hinjiru.
Facebook maqaasaa 'Meta' jechuun geeddarate
Daqiiqaa 22 dura
Dhiyeenya Dasee fi Kombolchaatti lolli cimee jiraachuun gabaafame
Haleellaa xiyyaaraa magaalaa Maqaleen namootni jaha du'anii, 20 ol madaahan
Jiraattonni Walloo Kaabaa fi Waag Himraa rakkoo hamaaf saaxilamuun himame
Fonqolcha Sudaan: Eessaa garamiitti?
Barreessaa Olaanaan UN haleellaa xiyyaaraa Tigiraayitti raawwate cimsanii balaaleffatan
26 Waxabajjii 2021
'EUn gochawwan humnootii Tigraay qeequu dhabuun mootummaa Itoophiyaa muufachiise'
Sudaanitti hiriirri mormii itti fufe, intarneetii deebisuuf haaldureen kaahame
Ameerikaan yeroo jalqabaaf namoota saala lameeniin of hin ibsineef paaspoortii qopheessite